भारतद्वारा सिड्नीबाट तीन र इन्डोनेसियाबाट एक नेपालीको उद्धार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
भारतद्वारा सिड्नीबाट तीन र इन्डोनेसियाबाट एक नेपालीको उद्धार
जेष्ठ १२, २०७७ जगदीश्वर पाण्डे
काठमाडौँ — भारतले अस्ट्रेलियाको सिड्नीबाट तीन र इन्डोनेसियाबाट एक नेपाली विद्यार्थीको उद्धार गरेको छ ।
नेपालस्थित भारतीय दूतावासका अनुसार सिड्नीबाट कास्कीका एकै परिवारका तीन जनाको सोमबार उद्धार गरिएको हो । नेपाली दूतावाससँगको समन्वयमा उनीहरूलाई इन्डियन एयरलाइन्समा दिल्ली ल्याइएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।
यसरी आउनेमा अर्जुनप्रसाद तिमिल्सिना, विश्व तिमिल्सिना र मुक्तिप्रसाद तिमिल्सिना छन् । उनीहरूमध्ये एक बाबु र दुई छोरा हुन् । जेठो छोराको बोनम्यारोको ट्रान्स्प्लान्ट गर्नुपर्ने भएपछि उनीहरू दिल्लीको बीएलके अस्पताल आएका हुन् । एक छोराले अर्को छोरालाई बोनम्यारो दिँदै छन् । उनीहरू अहिले अस्पतालमा सुरिक्षत रहेको र तीनै जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा नेगेटिभ देखिएको पनि दूतावासले जनाएको छ ।
यस्तै, चितवन रत्ननगर–९ की सेविका ढकाललाई गत शुक्रबार उद्धार गरिएको हो । उनी भारतकै हरियाणा राज्यको महाऋषि मार्कण्डेय विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत थिइन् । बीबीए दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत उनलाई कलेजले इन्डोनेसियाको एयरलंगा विश्वविद्यालयमा तीनमहिने ‘एक्स्चेन्ज कार्यक्रम’ अन्तर्गत पठाएको थियो । ढकाललाई इन्डोनेसियामा रहेको नेपाली दूतावाससँगको समन्वयमा उद्धार गरिएको हो ।
प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ १३:५८
काठमाडौँ — त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पीसीआर परीक्षण ल्याब स्थापना गरिएको छ । शिक्षण अस्पतालमा सोमबार कोरोना संक्रमित भए नभएको छुट्याउनका लागि पीसीआर ल्याब स्थापना गरिएको हो । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोशालाका निर्देशक डा. रुना झाले ल्याब पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेकी छिन् ।
नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो क्रममा रहेकाले परीक्षणको दायरा पनि बढाउन पूर्ण क्षमतामा ल्याब सञ्चालन गर्न उनले आग्रह गरिन् । अस्पतालका कर्मचारीलाई तत्काल तालिम दिएर परिचालन गरिने उनले बताइन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले एक ‘सिफ्ट’मा ९६ जनाको स्वाब परीक्षण गर्ने क्षमताको ल्याब स्थापना भएको जानकारी दिए । अहिले पूरा क्षमतामा ल्याब सञ्चालन गरेर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने दायित्व भएको उनले बताए ।
योसँगै देशभरि पीसीआर परीक्षणका लागि १७ वटा ल्याबहरु सञ्चालनमा आएका छन् । संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्थामा परीक्षणको दायरा बढाउन यसले अझ सहयोग पुग्नेछ । त्रिविसँग तीन वटा पीसीआर मेसिन रहेका छन् । त्रिविले देशभरि रहेका आफ्ना भौतिक संरचनाहरु आवश्यक परे प्रयोग गर्न पनि ३ वटै तहका सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ १३:४७